Hormuud oo deeq waxbarasho bixineysa | Xaqiiqa Times - Online Magazine
Home Arimaha Bulshada Hormuud oo deeq waxbarasho bixineysa
Hormuud oo deeq waxbarasho bixineysa
Shirkadda Hormuud oo ka mid ah shirkaddaha ugu waa weyn isgaarsiinta Soomaaliya ayaa shaaca ka qaaday in ay deeq waxbarasho siin doonto ardayda ugu darajada sareeya dugsiyadda sare ee Soomaaliya boqolkiiba labbo, sidaas waxaa sheegay Cabdalla Cabdullaahi Maxamuud oo ah madaxa xirriirka caalamiga ah ee shirkaddaasi.
Hormuud oo la aas-aasay sanadkii 2002-dii ayaa marki hore waxa ay ahayd shirkad isgaarsiin iyo xawaaladdii la xiray ee Al-Barakaat waxaana haatan ka shaqeeya qeybaheeda kala duwan shaqaale ku dhow 15,000 kun iyadoo 4,000 oo kalena ay ka mid yihiin dadka saamiga ku leh. Waxayna saamileydu helaan sanad walba faa’iidooyin ay ku farxaan sida uu xusay Cabdalla mar uu la hadlayay qaar ka mid ah warbaahinta gudaha ee Soomaaliya.
Muddane Caballa, waxuu intaasi ku daray in shirkadda Hormuud ay sameysay nidaamka lacagta la isugu diro teleefoonka ee loo yaqaano EVC, taas oo u suurta galisa shacabka in ay si fudud u adeegtaan ka dib markii ay suura gali weysay in dawladdu ay lacago cusub soo daabacdo.
Madaxa Hormuud wuxuu soo hadal qaaday in hawlahaasi ka sokow ay shirkaddu hormuud ka tahay ka qeyb qaadashada kaalinta gargaarka ee loo fidiyo shacabka gudaha wadanka ku nool isaga oo carabka ku adkeeyay in markii ay dhacaan dhibaatooyin iyo musiibooyinka dabiiciga ah sida; fatahaadaha iyo abaarrahu in shirkaddu tahay shirkadda ugu horeysa ee ka jawaabta mashaakilaadkaasi, tusaale ahaan waxuu sheegay Cabdalla in ay kaalmo ka geysteen fatahaadihii Beladweyne, dhanka kalana ay kaalmo u fidiyeen 500 oo beeraley ah kuwaasi oo shirkaddu ka gacan siisay dib u beerashada beerahoodi ku waxyeeloobay fatahaadaha webiga Shabeelle.
Masuulkaan sare ee shirkadda Hormuud ayaa sidoo kale tilmaamay in dhanka waxbarashadda ay ka taageeraan iskuulka indhoolayaasha Al-nuur kaasoo hoy iyo goob waxbarasho u ah indhoolayaal farabadan oo ku nool gudaha caasimaadda Soomaaliya ee Muqdisho.
Dhawaan ayey ahayd markii warar xog-ogaal ah oo ay si hoose u heshay Xaqiiqa Times lagu shaaciyay in shirkadda Hormuud dhanka korantadda ka caawiso 6 cusbitaal oo ka mid ah kuwa ugu waa weyn ee Muqdisho. Marka si qoto dheer loo sii milicsado warbixintaas wargeysku soo bandhigay waxaa muuqanaya in shirkaddaha waa weyn haddii ay sii labo laabaan dadaadkooda ay dhamaantood wax badan ummada u qaban karaan, tartankooda ganacsigana u badalaan mid ku saleysan samafal iyo u gargaarid bulsheed ay ugu danbeyntii dhaxal siin doonto faa’iido, magac iyo maamuus aad u sareeya oo ay shacbiyad ku helaan.
Waxaa kale oo xusid mudan in shaqaalaha xukuumadda Soomaaliya ay waqti xaadirkaan gaarayaan 3,500 halka shaqaalaha dawlad goboleedka Puntland ay gaarayaan 7000, balse dhinaca maamulka Somaliland waxay ka badan yihiin labo jibaarka shaqaallaha dawladda dhexe iyo kan Puntland. Haddaba Hormuud kaliya oo aan lagu darin shirkaddaha kale ee dalka ka jira ayaa waxay ka badan yihiin shaqaallaha dawladda federaalka Soomaaliya iyo kan Puntland.
Hase ahaatee, khubaradda dhaqaallaha ayaa qiyaasaya in shirkaddaha gaarka loo leeyahay ay ka hawlgalaan in ka badan 30,000 oo shaqaalle maxali ah. Su’aashuse waxa ay tahay dawladda Soomaaliya maxay ugu talagashay horrumarinta shirkaddaha wadaniga ah iyo la shaqeyntooda kuwaasoo halbowle u ah nolosha bulshadda Soomaaliya?
Previous articleDiplomaasiyadda Soomaaliya 54 sano kaddib
Next articleXirriir cusub oo u billowday Soomaaliya iyo Mareykanka waa maxay sababtu?